Tallaallada lagu safrayo Brazil: Ka hortagga cudurada oo ku raaxee safarka | Wararka Safarka
Luis Martinez | 28/05/2021 10:40 | Brasil, Talooyin
Ka hadalka tallaalada aad ugu safreyso Brazil waxay ka dhigan tahay sameynta consejos, maaha waajibaadka. Tani waxay ka dhigan tahay in dowladda Brazil aysan u baahnayn nooc tallaal ah oo ay dalka u soo gasho. Marka laga reebo shuruudaha laga soo qaatay faafa (waa kan maqaal ku saabsan heerarkan qaran ahaan), Ma jiraan xaalado nadaafadeed oo sharci ah oo lagu booqdo dhulka Rio de Janeiro.
Si kastaba ha noqotee, waa inaad maskaxda ku haysaa in Brazil ay tahay waddanka shanaad ee adduunka ugu weyn. Waxay leedahay in ka badan sideed milyan oo kiiloomitir oo laba jibbaaran waxaana ku jira kala duwanaansho ballaaran cimilo iyo juquraafi ahaanba. Sidaa darteed, waxaa aad loogu talinayaa in hesho tallaalada qaarkood si aad ugu safartid BrazilGaar ahaan haddii aad u socoto gobollada qaarkood.
1 Tallaalada loogu safro Brazil, in ka badan talo bixin
1.1 Tallaalka qandhada jaallaha ah
1.3 Tallaalka cagaarshowga A
1.4 Tallaalka cagaarshowga B
1.5 Tallaalka MMR
2 Taxaddarrada kale ee safarka Brazil
Tallaalada loogu safro Brazil, in ka badan talo bixin
Sidaan kuu sheegnay, waddanka Koonfurta Ameerika waa mid aad u ballaaran oo ay ku jiraan qayb wanaagsan oo ka mid ah Amazon. Sidaa darteed, uma baahnid tallaal isku mid ah haddii aad u safartid ta dambe sidii aad u samaynaysid oo kale Rio de Janeiro, tusaale ahaan.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, waxaa jira tiro iyaga ka mid ah oo aad loogu taliyay iyada oo aan loo eegin dhulka aad booqatay. Midkoodna wax ku yeeli maayo, sidaa darteed waxba kuma waayi doontid adoo gashanaya iyo iska ilaalinta halista cudurada halista ah. Waxaad codsan kartaa ballan si aad iskaga tallaasho mid ka mid ah xarumaha tallaalka caalamiga ah ee Wasaaradda Arimaha Dibada Spain ee xidhiidhkan. Laakiin, iyada oo aan la sii ambaqaadin, waxaan kaala hadli doonnaa tallaallada aad ugu safrayso Brazil ee lagu taliyay.
Tallaalka qandhada jaallaha ah
Cabsida laga baqo ee aedes aegypti, sababta cudurka qandhada huruuda ah
Tani waa cudur caan ka ah waddanka Koonfurta Ameerika ku yaal, illaa goor dhoweydna, mas'uuliyiintoodu waxay dalbanayeen in laga tallaalo ka hor intaanay soo gelin waddanka. Qandhada jaalaha ah waa cudur faafa oo ba'an oo ay keento kaneecadu qaniinyadeeda. Aedes aegypti, sidoo kale loo yaqaan kaneecada hooyada.
Cayayaankan ayaa sidoo kale gudbiya dengue, ka khatar badan, maadaama uusan lahayn tallaal. Laakiin, dib ugu noqoshada qandhada huruudda ah, astaamihiisu waa, si sax ah, qandho, madax xanuun iyo dhabar xanuun, lallabbo iyo matag. Haddii aan lagu daaweyn waqtiga, bukaanku wuxuu bilaabaa inuu horumariyo cagaarshow (sidaa awgeed sifada huruudda ah) iyo dhibaatada dhiig-baxa. Wejigan labaad wuxuu soo bandhigayaa dhimasho qiyaastii ah 50%.
Sidaa darteed, waa cudur aad u daran. Iyo, maadaama aysan wax lacag ah kuugu fadhiyin inaad iska tallaasho, taladeena haddii aad u safarto Brazil waa inaad had iyo jeer u sameyso si aad u degto. Si kastaba xaalku ha ahaadee, haddii aad booqato Amazon, xusuusnow in tallaalkani uusan kaa difaaci doonin kuwa aan soo sheegnay dengue. Markaa xidho dhar gacmo dhaadheer oo isticmaal dawada kaneecada adag.
Cudurkan wuxuu uga duwan yahay kii hore, cudurkan waxaa la dhibaateeya jeermiska Clostridium tetani nabar ku dhaca. Sidaad ogtahay, tan waxaa loo soo saari karaa si fudud, gaar ahaan haddii aad u safarto meelaha duurjoogta ah ee Brazil. Waana inaad maskaxda ku haysaa in bakteeriyada aan soo sheegnay laga helo dusha kasta oo wasakhaysan. Tusaale ahaan, waxay aad ugu badan tahay biraha oksaydhka.
Sidaa darteed, dhib kuguma aha inaad la kulanto iyada. Dhanka kale, ka clostridium abuuraa neurotoxins taas oo saameyn ku yeelata dhamaan nidaamka neerfaha. Astaamaha ugu waaweyn waa muruqyada, kala-goysyada murqaha, qallafsanaanta iyo xitaa curyaannimada. Waxay la socdaan qandho, dhidid badan, iyo hoos u dhac.
Marka laga reebo dhibaatada ay keento, haddii aan lagu daaweyn waqtigeeda, waxay noqon kartaa mid geeri ah. Sidaa darteed, sidii aan horeba kugula talinay, waxba kuma waayi doontid tallaalka cudurkan.
Dhinaca kale, tallaalka teetanada badanaa waxaa ku jira kuwa gawracatada iyo kuwa xiiq-dheer, ayaa sidoo kale lagu taliyay in loo safro Brazil. Midka hore waa cudur faafa oo afka lagu kala qaado, qaasatan qufaca ama hindhisada. Waxaa keena wicitaanka Klebs-Löffler bacillus waxayna si gaar ah ugu darantahay caruurta yar yar.
Xiiq-dheerta, sidoo kale waa cudur neef-mareenka la is qaadsiiyo oo ay keento bakteeriyada Bordetella pertussis. Dabeecad ahaan waa qufaca isboortiga waana mid faafa. Sidii tii hore oo kale, waxay si aad ah u saameysaa carruurta yaryar. Si kastaba ha noqotee, inay keento dhibaatooyin mooyee, badanaa si fiican ayey u bogsataa.
Tallaalka cagaarshowga A
Safka loogu jiro tallaalka
Tani sidoo kale waa cudur faafa, oo sababa caabuq ku dhaca beerka. Waxaa soo saaray, si hufan, fayraska cagaarshowga A ama Paramyxovirus 72 waana ka halis yar yahay noocyada kale ee isla cudurka oo aan sidoo kale kaala hadli doono.
Xaqiiqdii, ma noqon karto mid daba-dheer ama sababi kara dhaawac beerka oo joogto ah. Laakiin si fudud ayaa loo kala qaadan karaa, maadaama lagu kala qaado cunto ama biyo wasakhaysan, iyo waliba dusha meelaha aan nadiifka ahayn. Sababtaas awgeed, waxaan kugula talineynaa inaad si joogto ah u dhaqdo gacmahaaga, wax shaki la'aan, kuu yeeri doona adigu aqoon u leh maadadda 'coronavirus' darteed.
Iyo, dabcan, waxaan kugula talineynaa inaad iska tallaasho cagaarshowga A. Waxaa lagu tallaalay laba qiyaasood oo lix bilood u dhexeysa. Way ku habboon tahay inaad u safarto Brazil, markaa waa inaad tixgelisaa qaadashada tallaalka waqti fiican. Si loo dhammaystiro, waxaad u baahan tahay lix bilood inaad dhaafto, sidaan dhahnay.
Tallaalka cagaarshowga B
Fayraska cagaarshowga B
Waxaan kuu sheegi karnaa cudurkaan isla wixii aan ku soo sheegnay cagaarshowga A. Si kastaba ha noqotee, habka B waa ka khatar badan, maadaama ay wax soo saari karto caabuq raaga tanina, waxay u horseedi kartaa beerka hawlgab, cirrhosis ama kansarka beerka.
Si kastaba ha noqotee, xaaladaha badankood ma ahan mid halis ah. Laakiin waxay qaadan kartaa ilaa afar bilood in astaamuhu soo muuqdaan laga bilaabo isla marka aad cudurka qabtid. Xaaladdan, waxaa lagu kala qaadaa dareeraha jirka. Tusaale ahaan, dhiig ama shahwad, laakiin maaha qufac ama hindhiso.
Intaa waxaa dheer, ka soo horjeedka waxa ku dhaca cudurada kale, cagaarshowga B wuxuu noqdaa mid si fudud u raaga dhalinyarada marka loo eego kuwa waaweyn. Sidaa awgeed, waxaa ugu fiican in la is tallaalo ka hor intaadan u safrin Brazil. Xaaladdan oo kale, antigenku wuxuu ka kooban yahay laba ama saddex qiyaasood oo la qaato, sidoo kale, oo u dhexeysa lix bilood.
Ilmo qaata tallaalka MMR
Kani waa magaca loo bixiyo midka ka hortaga xanuunada sida jadeecada, jadeecada, iyo jadeecada. Midka hore waa infekshan nooca exanthematic ah, taas oo ah, waxay ku dhacdaa nabarro casaan ah oo maqaarka ku dhaca, oo uu sababo fayras, gaar ahaan qoyska. paramyxoviridae. Calaamadaha kale ee cudurkan waa qufac, hadday maskaxda kiciso, waxay noqon kartaa mid aad u daran.
Sida for rubellaSidoo kale waa cudur faafa oo sidoo kale ka muuqda finan maqaarka ah waxaana sababa fayras. Xaaladdan, waxaa lagu kala qaadaa marinka hawada waxayna qaadataa inta udhaxeysa shan ilaa toddobo maalmood si ay isu muujiso, laakiin waa mid aad u faafa. Si kastaba ha noqotee, marka laga reebo kiisaska haweenka uurka leh ma ahan wax halis ah. Kuwaas, waxay dhaawici kartaa uur-ku-jirka oo sababa dhaawac joogto ah.
Ugu dambeyntiina parotitis sidoo kale waa cudur caadi ah. Magaciisu wuxuu u eg yahay inaanad aqoon u lahayn adiga. Laakiin, haddii aan kuu sheegno inay iyagu yihiin qaamo-qashiirtaXaqiiqdii waad maqashay iyaga. Waxaa lagu kala qaadaa Qaamow qashiis myxovirus, in kasta oo uu jiro nooc kale oo ay keento bakteeriya. Sidoo kale ma aha cudur halis ah inta la daaweynayo. Haddii kale iyo xaaladaha ba'an waxay u horseedi kartaa qoorgooyaha, beeryarada ama dhalmo la'aanta ragga.
Tallaalka MMR wuxuu ka hortagaa dhammaan cudurradan waxaana lagu bixiyaa laba qiyaasood oo u dhexeeya afar toddobaad.
Taxaddarrada kale ee safarka Brazil
Biyaha dhalada ku jira
Kuwa aan kuu sharaxnay waa talaalada aad ugu safartid Brazil taas oo ay ku taliyeen dadka takhasuska leh. Waxaan kugula talineynaa inaad dhigatid haddii aad sameynaysid. Laakiin, intaa waxaa dheer, waxaa lagugula talinayaa inaad raacdo taxaddarro kale oo safarkaaga ah si caafimaadkaaga uusan waxyeello u geysan.
Tallaabada ugu horreysa waa inaad adiga iska qorto Diiwaan Gelinta Socdaalka ee Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo in aad kireysato a caymiska caafimaadka safarka. Maskaxda ku hay in Lambarka Bulshada ee Isbaanishku uusan ansax ahayn Brazil. Sidaa darteed, haddii aad xanuunsato, dhammaan kharashyada waxay ku ordi lahaayeen kharashkaaga. Taasna waxaa ka mid ah isbitaal dhigid, daaweyn iyo xitaa dib u celin.
Dhinaca kale, noolaha oo dhami waxay ku talinayaan in, marka aad biyo cabeysid, kaliya aad cabeyso dhalo ku shubtay, marna qasabadda ama ilaha biyaha. Sidoo kale, miraha iyo khudradda aad cunayso waa inay ahaadaan si fiican loo dhaqay oo jeermiska loo diley.
Marka laga hadlayo xeebaha, hubi inaysan nijaasayn. Daaran Sao Paulo y Santa Catarina waxaa jira tiro aad u yar oo maydhashada la mamnuucay. Daawooyinkana ka qaad Spain si looga fogaado inay ka baxaan. Si kastaba ha noqotee, waa lagaa baari karaa garoonka diyaaradaha markay yimaadaan. Sidaa darteed, waxaan kugula talineynaa inaad sidoo kale keento cuntada ama dukumiintiga caddaynaya inaad qaadanayso.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, hadaad shaki qabto, waxaan kugula talinaynaa inaad booqato bogga Wasaaradda Arrimaha Dibadda si loo cadeeyo dhamaan waxaad wali layaabantahay.
Gabagabadii, waxaan kaaga wada sheegnay dhamaan tallaal si loogu safro Brazil waxaa kugula taliyay khuburo. Midkoodna ma laha waxyeelo, markaa waxaan kugula talineynaa inaad gashato. Iyo, haddii aad weli shaki qabto, sidoo kale waxaa lagugula talinayaa inaad la tashato dhakhtarkaaga. Sidaa darteed, waxaad u safri doontaa si ammaan ah oo aad ku noolaan doontaa a khibrad aan caadi ahayn in cudur uusan ku baabi'in karin.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka Safarka » America » Brasil » Tallaalada loogu safro Brazil